Entertainment Archives - 24 News Press
Posted By: 24 News Presson: July 28, 2020
पाँचथरको एउटा स्कूलबाट एसएलसी उत्तिर्ण गरेर उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आउनुअघि नै सुप्रिया कटवालले कलाकार बन्ने सपना देखिसकेकी थिइन् । करिव ८ वर्षअघि काठमाडौं आएर प्लस टुमा अध्ययन प्रारम्भ गरे लगत्तै उनले एउटा इन्स्टिच्यूटमा नृत्यको प्रशिक्षण पनि प्रारम्भ गरिन् ।
नाच्न त उनी स्कूलमै छँदा पनि राम्रो नाच्थिन्, तर काठमाडौंमा प्रोफेसनल तरिकाले सिक्ने उदेश्यले उनले नृत्य कक्षा ज्वाइन गरेकी थिइन् । नृत्यमा थप पारंगत भैरहँदा सुप्रियाले सोचे जस्तै भैदियो । उनले एउटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने अवसर पाइन् ।
अभिनेत्री केकी अधिकारी तथा अभिनेता किरण लाकौलसंगै उनले अभिनय गरेको पहिलो गीत हो –‘एउटै छ धोको…।’
उक्त गीत आजभन्दा ठ्याक्कै सात वर्षअघि अर्थात सन् २०१३ को जुलाई २८ का दिन यूट्युबमा अपलोड भएको थियो ।
त्यसको ठिक एक महिनापछि सार्वजनिक भएको गायक कन्हैया सिंहको ‘मन हुनेको माया…’ सुप्रियाले अभिनय गरेको दोस्रो म्युजिक भिडियो थियो ।
त्यसपछि एक, दुई गर्दै सुप्रियाले पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा झण्डै एक सय भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेर आफ्नो अभिनय कौशल प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् ।
‘मैले अभिनय यात्रा प्रारम्भ गर्दा म किशोरावस्थामै थिएँ, अभिनेत्रीको रुपमा समेत चिनिने सुप्रियाले हालैको एक मध्यान्ह्र कलाकर्मी डटकमसंग कुराकानी गर्दै विगत सम्झिइन्- ‘अभिनय गर्ने हुटहुटिले म्युजिक भिडियोमार्फत यात्रा त प्रारम्भ गरें, तर यो क्षेत्रमा सात वर्ष बिताउने क्रममा अनियमित सेड्यूल, अनियमित खानपान, परिवारको असहयोग तथा कामको तुलनामा फुर्सद बढी हुने भएकाले मैले आफ्नो यात्रा मोडें । म आज अभिनेत्री तथा मोडलभन्दा पनि समाचारवाचिका तथा सञ्चारकर्मी सुप्रिया कटवालको रुपमा चिनिन पाउँदा बढी सन्तुष्ठ हुन्छु ।’
केही दिनअघि मात्रै आफ्नो बर्थडे सेलिब्रेट गरेकी सुप्रिया अध्ययनमा पनि उत्तिकै अब्बल छिन् ।
सुप्रियाले काठमाडौंको एउटा प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाबाट होटल म्यानेज्मेन्टमा स्नातक उत्तिर्ण गरेको केही वर्ष भैसक्यो ।
समाजसेवामा रुची राख्ने सुप्रियालाई सामाजिक कार्य विषयमा स्नातकोत्तर गर्न रहर लाग्यो ।
तर त्यसका लागि बिएसडब्ल्यूमा स्नातक उत्तिर्ण गर्नु पर्ने नियम भएकाले उनले त्यही नियमलाई फलो गरिन् ।
उनले विएसडब्ल्यूको स्नातकको तेस्रो वर्षको परीक्षामात्र दिन बाँकी छ ।
‘लकडाउनका कारण अन्तिम परीक्षा स्थगित भयो, अब हुन्छ होला, सुप्रिया भन्दैथिइन्- ‘स्नातक सकिएपछि यही विषयमा मास्टर्स गर्ने धोको पुरा गर्नु छ ।’
मास्टर्स गर्नका लागि विदेश नै जानु परे पनि पछि नपर्ने उनको योजना छ ।
म्युजिक भिडियोको अभिनयले दर्शकमाझ रामै्र छाप छाडेकी सुप्रियाले अभिनय गरेका अधिकांश भिडियोहरु दर्शकले मन पराएका छन् ।
उनलाई आफ्नै अभिनय मन परेका भिडियोहरुको संख्या पनि करिव एक दर्जन छ ।
ती मध्ये उनको नजरमा परेका उत्कृष्ट पाँच भिडियोको नाम लिन आग्रह गर्दा उनले भनिन्-‘सिन्कि अचार, मन हुनेको माया, ए चरी, लत लाग्यो तथा छिट्को सारी…।’
‘मैले एक सयभन्दा बढी भिडियोमा अभिनय गरें, नेपालका अधिकांश गायक–गायिकाका गीतमा अभिनय गरें, अधिकांश निर्देश्ँकहरुसंग काम गरें, अधिकांश अभिनेताहरुसंग पनि काम गरें, सुप्रिया भन्छिन्-‘तर मैले अभिनय गरेका भिडियोहरु अहिलेको भाषामा ‘भाइरल’ भएनन्, न त ट्रेन्डिङमै परे ।’
‘त्यहि पनि म निराश भइन, सुप्रिया भन्छिन्–‘अभिनय मेरो करियर हो भनेर मेहनत गरिरहें ।’
कतिसम्म भने उनी एक हप्तापछि भिडियोको छायांकन छ भने आजैदेखि उक्त भिडियोका लागि आवश्यक पर्ने पहिरनहरुको जोहो गर्थिन् ।
नृत्य गर्नु छ भने त्यसको अभ्यास पनि गर्थिन् । दर्शकले पनि उनलाई भिडियोहरुकै कारण चिनेका थिए ।
यो अवधिमा उनले जीवन लुईंटेल, पुष्प खड्का, पल शाह, दिवस उप्रेतीसहित थुपै्र अभिनेताहरुसंग अभिनय गरिसकेकी छिन् ।
सुप्रियाले म्युजिक भिडियोमा मात्रै अभिनय गरिनन् ।
केही चलचित्रमा समेत उनले आफ्नो भाग्य परीक्षण गरिन् ।
सत्यराज आचार्य अभिनेता भएको चलिचत्र ‘साढे सात’ की अभिनेत्री सुप्रिया नै हुन् ।
चलचित्र राम्रो बनेको भए पनि व्यवसायिक रुपमा भने सफल हुन सकेन ।
त्यसपछि उनले तीन घुम्ती, कुसुम, बिर्खेलाई चिन्छस जस्ता चलचित्रमा पनि ठूला–साना भूमिका निर्वाह गरिन् ।
यद्यपि, उनलाई चलचित्रमै अभिनय गरिरहन मन लागेन ।
चलचित्र क्षेत्र आफ्नो लागि बनेको होइन भन्ने फील भयो ।
त्यसैले उनले चलचित्रमा लामो समय बिताउने योजना नै बनाइनन् ।
चलचित्रमात्र होइन, उनी म्युजिक भिडियोबाटै पनि बिरक्तिँदै गएकी थिइन् ।
हरेक समय केही न केही गरिरहनु पर्ने बानी परेकी सुप्रियालाई हप्पामा एउटा म्युजिक भिडियोमा काम गरेपछि बाँकी दिन खालि बस्नु पर्ने कुरा चित्त बुझिरहेको थिएन ।
कलेजको अध्ययन पनि सकिएकाले उनले दिउँसो खालि बसेर दिक्क हुनुभन्दा एक पटक आफैंले अध्ययन गरेको होटल म्यानेज्मेन्टमै करियर बनाउने कि भन्ने पनि सोचिन् ।
र्याडिसन होटलमा उनले जागिर पनि पाइसकेकी थिइन्, तर कलाकारको रुपमा स्थापित भैसकेकी सुप्रियाले घण्टौं उभिएर काम गर्नु पर्ने होटलको जागिरमा रुची देखाइनन् ।
कलाकारको रुपमा स्थापित भए पनि उनी समसामयिक विषयवस्तुमा रुची राख्थिन् ।
टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने प्राइम टाइमका समाचारहरु भ्याए सम्म हेर्थिन् ।
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषयवस्तुमा रुची राख्थिन् ।
यद्यपि, उनले पत्रकारिता अथवा समाचारसंग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्छु अथवा करियर बनाउँछु भन्ने सोचेकै थिइनन् ।
तर, भनिन्छ नि, भाग्यले मानिसलाई कहाँ–कहाँ पुर्याउँछ ।
म्युजिक भिडियोमा व्यस्त भैरहेकै बेला करिव चार वर्षअघि सुप्रियाको जम्काभेट अरनिको टेलिभिजनका एक जना सञ्चालकसंग जम्काभेट भयो ।
उक्त भेट नै उनलाई सञ्चारकर्मी (समाचारवाचिका) बनाउन पर्याप्त भयो ।
ज्ञज्ञज्ञचार महिनाअघि लकडाउन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि उनले एउटा लोक गीतको भिडियोमा अभिनय गरेकी थिइन् । त्यसयता उनले भिडियोमा अभिनय गरेक छैनन् ।
अनि बनिन् समाचारवाचिका !
एउटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्यो अनि एक हप्ता खालि बस्यो ।
अर्को म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्यो, त्यसपछि फेरि एक हप्ता खालि बस्यो ।
छायांकनको दिन पनि बिहानै स्पटमा पुग्यो, चाउचाउ खायो, काम गर्यो ।
खाना खाने निश्चित समय हुँदैन ।
न त राति कति बजे घर पुगिन्छ भन्ने निश्चित हुन्छ ।
घर ढिलो आउँदा परिवारका सदस्यलाई के भन्ने भन्ने चिन्ता, छिटो घर फर्किउँ छायांकन सकिएकै हुँदैन ।
उनले अभिनयमा करियर बनाइरहेको त उनका परिवारलाई चित्तै बुझेको थिएन ।
यी सबै कुराहरुले रुमल्लिरहेकी सुप्रियालाई अरनिको टेलिभिजनबाट आएको काम गर्ने प्रस्ताव निकै उत्साहजनक लाग्यो ।
उनलाई आफ्नै अव्यवस्थित सेड्यूलले स्टे्रस दिइरहेको थियो, तनाव बढाइरहेको थियो ।
अब चाहिं सेड्यूल अनुसारको काम गरौं न भन्ने लागिरहेकै बेला उनले उक्त टेलिभिजनबाट कामका प्रस्ताव पाइन् ।
‘सबै कुरा भए पनि के नमिलेको, नमिलेको जस्तो भैरहेको थियो, सुप्रियाले अभिनयको सक्रियतालाई एकातिर थन्क्याउँदै टेलिभिजन क्षेत्रमा पदार्पण गर्दाको क्षण सम्झँदै भनिन्- ‘आफूले पढेको विषय (होटल म्यानेज्मेन्ट) मा काम गर्नै मन लागेन, अभिनय गरेर अघाइसकेकी थिएँ ।’
त्यसैले करिव दुई वर्षअघि उनले नयाँ क्षेत्रमा हात हालिन्, समाचारवाचिकाको रुपमा काम नै गर्न थालिन् । अरनिको च्यानलमा समाचारवाचिकाको रुपमा काम गर्न थाले लगत्तै उनले डिसहोमको स्र्पोट्स च्यानलमा पनि काम पाइन् । उक्त च्यानलमा त उनले टक शो कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न थालिन् ।
खेलाडीहरुसंगको टक शो कार्यक्रमले पनि सुप्रियालाई राम्रो माइलेज दियो । टेलिभिजनमार्फत उनले आफ्ना प्रसंशकहरुको संख्या बढाउँदै लगिन् । करिव सात महिनापछि एउटै व्यक्तिले दुई भिन्न च्यानलमा काम गर्न नमिल्ने जस्तो कुरो चल्यो । उनले एकै पटक दुई वटै च्यानलको काम छाडिदिइन् र तेस्रो विकल्पको खोजिमा जुटिन् ।
‘डेढ वर्षअघि एपिवान ज्वाइन गरें, सुप्रिया भन्छिन्- ‘कम समयमै दर्शकको मन जितिसकेको यो च्यानलमा काम गर्ने इच्छा जागिरहेको थियो, कामका लागि आवेदन दिएको केही दिनमै स्क्रिन टेस्ट भयो, जसमा म उत्तिर्ण भएँ ।’
‘मलाई एउटा राम्रो तथा स्थापित च्यानलमा काम गरेर देखाउनु थियो, ममा भएको क्षमता प्रमाणित गर्नु थियो, सुप्रियाले एपिवान ज्वाइन गरेपछि करिव तीन महिना त स्थलगत रिर्पोटिङ समेत गरिन् ।
‘यो च्यानलले चाहिँ मलाई पक्का सञ्चारकर्मी बनायो, सुप्रिया एकाएक कलाकारबाट सञ्चारकर्मी बनिन् । सामाजिक विषयमा रिर्पोटिङ गरेको करिव तीन महिनापछि उनी एपीवानको स्टुडियोमा छिरिन्–समाचारवाचिका सुप्रिया कटवालको रुपमा । प्रारम्भमा बिहान तथा दिउँसोका समाचारहरु वाचन गरेकी उनले पछि राति प्राइम टाइमको समाचार पनि वाचन गरिन् ।
अहिले उनी हप्ताको तीन दिन समाचार निर्माताको रुपमा काम गर्छिन् भने तीन दिन समाचारवाचिकाको रुपमा दर्शकमाझ आइरहेकी छिन् । अरनिको टेलिभिजनमा पहिलो पटक समाचारवाचन गर्दा उनी हल्का नर्भस भएकी थिइन्, केही गल्ति पनि भएका थिए । ‘अहिले मैले आफूमा धेरै सुधार ल्याइसकेकी छु, दुई वर्षअघि मैले पढेको समाचार र अहिलेको समाचारवाचनमा निकै नै अन्तर म स्वयंले महसूस गरेकी छु, उनी भन्छिन् ।
क्यामरासंग झण्डै पाँच वर्ष लुकामारी गरेर समाचार कक्षमा प्रवेश गरेकाले पनि उनलाई समाचारवाचिकाको रुपमा काम गर्न खासै असहज भएन । ‘क्यामराको लत छुटेको थिएन, भिडियो त गरिरहेकै थिएँ, सुप्रिया भन्छिन्-‘स्क्रिनलाई नै निरन्तरता दिन पाएकोमा असँध्यै खुशी छु ।’
सञ्चारकर्मीको रुपमा सक्रिय भएपछि धेरैले उनलाई मनोरञ्जन क्षेत्र किन छाडेको ? भन्ने जिज्ञासा पनि गरेका रहेछन् । अभिनय छाडे पनि टेलिभिजनमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम नै चलाउनु पथ्र्यो नि भन्नेहरु पनि निस्किए । उनी भन्छिन्- ‘मलाई आफूले छाडेर आएर मनोरञ्जन क्षेत्रलाई फलो गर्नै मन लागेन । केही नयाँ काम गरौं, नयाँ खोजौं भनेर समाचारको क्षेत्रमा आएकी हुँ ।’
यद्यपि, केही पछि उनले मनोरञ्जन क्षेत्रसंगै सम्बन्धित एउटा कार्यक्रम निर्माण गर्ने बारेमा योजना बनाइरहेकी छिन् । उक्त कार्यक्रममार्फत मनोरञ्जन क्षेत्रकै उचाइ बढाउने उनको योजना छ ।
समाचारवाचनमा सुप्रियाको आइडल को होला ?
‘समा थापा’, सुप्रिया भन्छिन्- ‘म उहाँको समाचारवाचनबाट मात्रै होइन, समग्र व्यक्तित्वबाटै प्रभावित छु ।’
कतिपयले सुप्रियाको समाचारवाचनलाई समा थापाको जस्तै..पनि भन्दा रहेछन् ।
यो कुराले उनलाई खुशी लाग्दो रहेछ ।
सुप्रियाको अभिनय पृष्ठभूमि थाहा नपाएका दर्शकहरुले भने उनलाई ‘हिरोइन हुनु पर्ने अनुहार रहेछ’ पनि भन्दा रहेछन् ।
सुप्रियाले हरेक प्रकारका प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रुपले लिएकी छिन् ।
सुप्रियाले जे सिकिन् !
लामो समय अभिनयमा बिताएकी सुप्रियाले एउटा ठूलो कुरा सिकेको बताएकी छिन्, जुन कुरा उनी आफैंमा लागू भएको बताउँछिन् ।
‘जुनसुकै क्षेत्रमा करियर बनाउनु भन्दा अघि आफू परिपक्व हुनु अनिवार्य रहेछ, यसका साथै हरेक कुराको निर्णय आफैंले गर्न सक्ने भएपछि मात्र कुनै पनि क्षेत्रमा अघि बढ्दा सफलता पाइने रहेछ । खासगरी मनोरञ्जन अर्थात अभिनयको क्षेत्रमा त राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्ने भएपछि मात्र आउनु पर्ने रहेछ ।’
उनले सिकेको अर्को अर्को एउटा कुरा छ- ‘आफूलाई मन भित्रदेखि रुची भएको काम गर्नु पर्छ । तपाईं जे गर्नु हुन्छ, त्यसमा तपाईं सक्षम र योग्य हुनु पर्ने रहेछ । अरुको अगाडि डिमाण्डेड भएर मात्र आउनु पर्ने रहेछ । पढाइ पुरा गरेर मात्र करियरका बारेमा सोच्नु पर्ने रहेछ ।’
‘कलाकारको रुपमा चिनिरहेकाहरुलाई मप्रति एउटा कन्फूजन पनि रहेछ, अभिनय क्षेत्रबाट आएको व्यक्तिले मूलधारको समसामयिक विषयमा के जानकारी होला भन्ने पनि सोच्नु भएको रहेछ, सुप्रिया भन्छिन्– ‘त्यो कन्फ्यूजनलाई मैले छोटो समयमै इरेज गर्न सफल भएँ ।’
समाचारवाचिकाको रुपमा बढी प्रसंशक कमाइयो कि अभिनेत्रीको रुपमा ?
सुप्रिया भन्छिन्- ‘अहिले नै बढी भन्नु पर्छ । अभिनय गर्दा पनि मलाई मन पराउनेहरु हुनुहुन्थ्यो । अहिले भने त्यो संख्या अझ बढेको अनुभव गर्दैछु ।’
सुप्रिया समाचारवाचनलाई संगीतकर्मीहरुले गर्ने रियाजसंग तुलना गर्छिन् ।
‘यो भनेको रियाज जस्तै रहेछ, जति पढ्दै गयो उति खारिँदै जाने, सुप्रियालाई कहिलेकाहिं समाचारको हेडलाइन वाचन गर्दा घाँटि खस्खसाउनु बाहेक अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो अनुभव गर्नु परेको छैन ।
पत्रकारितामा आएपछि सुप्रियाको जीवनमा के–के परिवर्तन भए त ?
उनी भन्छिन्- ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा म पञ्चुअल हुन सिकें । जिम्मेवारीपना सिकायो । समयमा चल्ने तरिका पनि सिकायो ।’
अभियनमा पुनः फर्किने सम्भावना चाहिं कत्तिको छ नि ?
कुराकानीको अन्त्यमा कलाकर्मीले राखेको यो जिज्ञासामा सुप्रियाको जवाफ छ- ‘कलाकारिताले नै मलाई सुप्रिया कटवाल बनाएको हो, त्यसैले त्यो क्षेत्रसंग मेरो एक प्रकारको एट्याचमेन्ट त रहि नै रहन्छ, त्यसैले महिना–दुई महिनामा एउटा–दुइटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्न सक्छु ।’ स्रोत -कलाकर्मी
एजेन्सी, हलिउड अभिनेत्री ओलिभिया डे हेभिल्याण्डको १ सय ४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
हलिउडमा ५० वर्षको करिअर बनाएकी ओलिभियाले ५० बढी फिचर फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् । साथै आफ्नो समकालिन कलाकारमा उनी सबैभन्दा धेरै उमेर बाँच्ने कलाकार समेत हुन् ।
ओस्कारमा विजेता बनिसकेकी ओलिभिया १९६० देखि पेरिसमा रहँदैआएकी थिइन् । ओलिभिया सबैभन्दा धेरै वर्ष बाँच्ने ओस्कार विजेता कलाकार समेत बनिन् ।
देबेन्द्रको निर्देशनमा रविना भण्डारी र दुर्गेश थापाको अभिनयमा”पुतली”गीत सार्वजनिक (भिडियो)
Posted By: 24 News Presson: June 06, 2020
काठमाडौँ – नेपाली गीतसंगीत भने पछी हरुकै हुने एक सर्जक हुन् केशब पौडेल । पौडेलले नेपालि लोक संगीतको क्षेत्रमा छुट्टै इतिहास लेखाउन सफल भैसकेका छन् । पौडेलको शब्द सृजनामा केहि वर्ष अगाडी बजारमा आएको‘उही खोलीको पानी उही खोलीको माछा’गित सर्वाधिक चर्चामा आयो र छोटो समयमा नै करोड क्लबमा पुगेको थियो ।
पौडेलका हरेक गीता उत्तिकै चर्चाको सिखरमा पुगेका छन् । पौडेलको सृजना रहेको एक एर्को गित ’गुन्द्रुक मिठो साग’पनि आम दर्शक स्रोताको मन मुटुमा बस्न एक सफल गित हो । यसै सन्दर्भमा आज फेरी S3K Entertainmentको प्रस्तुतिमा उनै सर्जक केशव पौडेलको उत्कृष्ट शब्द सृजनामा “पुतली”सार्वजनिक भएको छ । चर्चित रचनाकार तथा संगितकार शिव हमालको उत्कृष्ट संगीत रहेको गीतमा विक्रम परियार र चर्चित लोकदोहोहोरी गायिका देवि घर्तिमगरको स्वर रहेको छ ।
निर्देशक तथा कोरियोगरफ देबेन्द्र कुवरको निर्देशनमा रहेको उक्त म्युजिक भिडियो नरेश ऐरले छायाकन गर्नु भएको हो भने टेकेन्द्र शाहाले म्युजिक भिडियो सम्पादन गर्नु भएको छ । म्युजिक भिडियोमा पछिल्लो समय युवा पुस्ताका ढुकढुकी बनेका युवा मोडल दुर्गेश था र रविना भण्डारीको उत्कृष्ट अभिनय रहेको छ । यो म्युजिक भिडियो S3K Entertainment को अफिसियल युटुबबाट सार्बजनिक भएको छ । यो गीतका सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई । आशा छ यो गीतले पनि बिगतका गीता झैँ चर्चा कमाउने छ ।
अस्मिनकाे राष्ट्र प्रेमले वतप्राेत “मलाई कालापानी हेर्न मन छ” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
Posted By: 24 News Presson: May 15, 2020
चितवन, चितवनका युवा तथा विद्यार्थी नेता अस्मिन घिमिरेकाे “मलाई कालापानी हेर्न मन छ” बाेलकाे राष्ट्रिय गीत सार्वजनिक भएको छ ।
नेपालकाे भूमी कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षवाट अतिक्रमण बढेकाे बेला युवा गायक घिमिरेले सार्वजनिक गरेकाे याे गीत समयसान्दर्भिक छ ।
घिमिरेकै शब्द स्वर , कपिल घिमिरेकाे संगित रहेकाे यस गीतकाे भिडियोमा चर्चित कलाकारहरु दिपक राज गिरि, बद्री पङ्गेनी, सलाेन वस्नेत, दिपाश्री निराैला लगायतकाे अभिनय देख्न सकिन्छ । गीत निर्माणकाे परिकल्पनाकार रवी अधिकारी छन् । देशका शिर्ष नेताहरुकाे नामै लियर उनिहरुलाई सिमा रक्षाकाका लागि शसक्त खवरदारी गीतले गरेकाे छ ।
New Nepali National Song Nalapani -Lipulekh 2020। Ft:Deepak,Deepa,Badri,Salon ,Nirmal ,Asmin Ghimire
Posted By: 24 News Presson: April 01, 2020
काठमाडौँ, निर्देशक विकासराज आचार्य यतिबेला फिल्म ‘नाई नभन्नु ल-६’को तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
फिल्मको भने स्क्रिप्ट फाइनल भइसकेको छ । लक डाउनका कारण कलाकारहरु फाइनल भैसकेको छैन । तर, उनले केही कलाकारसँग भने कुराकानीलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।
उक्त फिल्ममा नायकमा सलोन बस्नेत, अनुभव रेग्मी, सेड्रिना शर्मा लगायतको नाम निश्चित भइसकेको छ। निर्माण पक्षले चलचित्रको मुख्य भूमिकाका लागि नायिका वर्षा राउतलाई प्रस्ताव गरेको छ । वर्षाले चलचित्रमा काम गर्ने वचन पनि दिएकी छिन् ।
तर, निर्माणपक्षले कोही पनि कलाकारसँग लिखित सम्झौता भने गरेको छैन । वर्षा चलचित्र ‘२ नम्बरी’ र ‘के घर के डेरा’मा अनुबन्धित भइसकेकी छिन्। यसैले, वर्षाले चलचित्र ‘नाई नभन्नु ल-६’लाई समय दिन भ्याउँछिन् या भ्याउँदिनन् पक्का छैन ।
मिस नेपाल २०२० को आवोदन खुल्ला
Posted By: 24 News Presson: February 25, 2020
काठमाडौँ: मिस नेपाल २०२० को लागि आवोदन खुल्ला गरिएको छ ।
सोमबारबाट खुल्ला गरिएको मिस नेपालको आवोदन मार्च २७ गतेसम्म भर्न सकिने छ । आवोदन फर्म मिस नेपालको वोवसाइटमा गएर पनि निशुल्क भर्न सकिने छ ।
मिस नेपालको अडिसन देशको विभिन्न ९ शहरहरु धनगडी, नेपालगंज, बुटवल, पोखरा, चितवन, विरगंज, धरान, विर्तामोड र काठमाडौँमा हुनेछ ।
यस वर्ष मिस नेपालमा ४ वटा मात्रै विधा समावेश हुनेछ । मिस नेपाल वर्ल्ड, मिस नेपाल अर्थ, मिस नेपाल इन्टरनेश्नल र मिस नेपाल सुपर नेश्नल । मिस युनिभर्स भने यस वर्ष हुनेछैनन् ।